Axmed Madoobe oo ceel kusii riday rajadii Midowga Musharaxiinta | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Axmed Madoobe oo ceel kusii riday rajadii Midowga Musharaxiinta
Hoggaamiyaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa isna shalay ku laabtay magaalada Jowhar, waxaa jira warar sheegaya inuu ka fakarayo inuu bilaabo doorashada Golaha Shacabka. Guudlaawe weli iskama uusan xalin xiisaddii ka jirtay magaalada Beledweyne.
Thomas Tuchel oo u furan inuu maqlo dalabka Manchester United.
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa lagu soo waramayaa inuu ‘u furan yahay’ inuu dhageysto Manchester United wax ku saabsan suurtagalnimada u dhaqaaqista Old Trafford dhamaadka ololahan. Booska Tuchel ee...
Xasan Sheekh oo markale loo doortay madaxweynaha Soomaaliya iyo nidaamkii Farmaajo...
Loolanka Fahad iyo guddiga FEIT – Maxaa dhici kara kadib go’aanka...
Wararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Kylian Mbappe oo Xiiseenaya ku Biirista...
Barcelona oo kula tartameysa Arsenal saxiixa xiddiga reer Brazil Yuri Alberto